Etu esi emepụta ecommerce? | ECommerce ozi ọma
N'ezie, ịmepụta ecommerce abụghị ọrụ dị mfe, mana ọ bụghị ọrụ anyị ga-atụ ụjọ site na oke mgbagwoju anya ya site ugbu a. Ruo n'ókè nke ịmalite ụlọ ọrụ ntanetị nke njirimara ndị a na atụmanya nke inwe nnukwu ọganihu ọkachamara ga-achọ, karịa ihe niile, ọ dị mma otu ịzụlite oru ngo a na nkwa dị ukwuu na ebumnobi a chọrọ.
Mana ọ bụ akụkụ metụtara ego nwere ike iwetara anyị nnukwu nsogbu kachasị maka mmepe ya. Karịsịa, n'ihi enweghị otuto na oge kpọmkwem nke ịmalite ya, nke bụ mgbe nsogbu kachasị njọ bilitere. Nyere mkpa ịzụta akụrụngwa kọmputa, nkwado teknụzụ yana ego ndị ọrụ kacha dabara adaba iji rụọ ọrụ ha kacha mkpa.
N'aka nke ọzọ, ị gaghị echefu na iji chee ihe ịma aka nke akụkụ ndị a ihu, ya bụ, ịmalite ikpo okwu ecommerce, ihe mbụ ị ga-achọ bụ ịmepụta atụmatụ ọrụ siri ike na nke ezi uche dị na ya. Dịka ị maraworị na ọrụ ọ bụla ọkachamara, ọ ga-adị mkpa ịmalite wuo ulo ahia ma obu ahia ahia Site na mbido. Na-enweghị ọsọ na ịga na mkpa mbụ na nke ahụ bụ ihe ị ga-akwụ ụgwọ site na kredit Bank.
1 Mepụta ecommerce: gaa n'akụkụ iwu
2 Kpọọ ụlọ ọrụ dijitalụ gị
3 Ihe e kere eke na ntanetị: onyinye gọọmentị
4 Kpachara anya na kredit
5 Olee otú ndị a Ebe e si nweta?
6 Ebe e si nweta ụtụ isi
Mepụta ecommerce: gaa n'akụkụ iwu
Obi abụọ adịghị ya na ntọala iwu na azụmaahịa gị ga-adị ezigbo mkpa na mbido. Ka you nweghi ike inwe nsogbu ozo site n’oge ahu. Iji mee nke a, ikwesiri ịmara maka iwu ugbu a na nke a. Yabụ na ịnweghị nsogbu ọzọ, ị gaghị enwe ihe ọzọ ị ga-eme ma ịkọ akụkọ gbasara iwu n'oge a. Dịka ọmụmaatụ, nke anyị rụtụrụ n'okpuru:
Iwu 7/1998, nke Eprel 13, na ọnọdụ nkwekọrịta izugbe.
Royal Iwu Iwu 1/2007, nke November 16, na-akwado ihe ederede ederede nke Iwu General maka Nchekwa Ndị Ahịa na Ndị Ọrụ.
Iwu 3/2014, nke March 27, nke na-agbanwe ederede ederede nke iwu izugbe maka ịgbachitere ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ.
N'okwu niile, ọ ga-abụ ihe ọmụmụ maka ịmalite ma ọ bụ mepụta ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. Site na ebe ha ga enye gi ntuziaka ka ị bụrụ onye ọchụnta ego na ngalaba a na-arụpụta ihe.
N'echiche a, ị kwesịrị icheta na ọ baghị uru ịmepụta ecommerce ma ghara ịgbaso iwu dị ugbu a. Maka na naanị ihe nwere ike ịkpata gị site n’oge ahụ bụ ọtụtụ nsogbu karịa ka ị chere na mbụ. Ọbụna iji mee ka ị nọrọ n'okporo ụzọ na ọrụ azụmaahịa gị. N'ezie ị kwesịrị ịma na iwu nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmahịa kọmputa na-achịkwa ọtụtụ iwu. Ha abụọ itinye ya n'ọrụ na njikwa ya.
Kpọọ ụlọ ọrụ dijitalụ gị
Na mbu, enwela obi abụọ na mgbe ị na-ekpebi aha maka ecommerce ọhụrụ anyị, anyị ga-ahụ okwu abụọ dị iche iche. N'otu aka, chọta aha nwere ike ịmetụta ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa, yana nke ọzọ, nke metụtara ọrụ azụmahịa gị site na usoro ọ bụla na njikwa ya.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ dịkwa oke mkpa ka ị buru n'uche site na nke a oge akụkụ ahụ jikọtara na ngwa gị. N'ihi na n'ezie, anyị ga-ahụ na ọtụtụ aha adịlarịị ma yabụ, anyị ga-abụrịrị ndị okike. Karịa ihe i nwere ike iche na mbụ. N'ihi na na njedebe nke ụbọchị ọ bụghị banyere inye ha aha ọ bụla ebe ọ nwere ike inwe mmetụta na-achọghị na ebumnuche gị n'ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Site na nke a pụrụ iche, enwela obi abụọ na ịhọrọ aha maka ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị ga-abụ obere ọrụ dị mgbagwoju anya. Ruo n'ókè nke na ọ nwere ike iwe oge karịa ka ị chere ugbu a. Ọ ka mma ichere ogologo oge ma mee ya nke ọma karịa ịnye aha ọ bụla n'ahịa gị site na .ntanetị. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ị na-atụgharị uche ka ihe niile wee zue oke site n'oge a. Ruo n'ókè na mgbe anyị na-ekwu okwu banyere akụkụ a, anyị na-ezo aka na mkpọsa mkpọsa ndị dị oke mkpa.
Varidị ọzọ dị iche iche bụ nke enyere n'oge a site na ịga na teknụzụ teknụzụ ka ị nwee ike ịmalite ọrụ gị n'ime ụlọ ọrụ ntanetị. Site na nke a, enwere ọtụtụ nhọrọ dị na ahịa maka ịmepụta ecommerce, agbanyeghị, ihe mbụ anyị ga-eburu n'uche bụ nha ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị.
Ihe e kere eke na ntanetị: onyinye gọọmentị
Madrid aghọwo obodo mbụ na Spain ebe ọ ga-ekwe omume ịmepụta ụlọ ọrụ site na ,ntanetị, mgbe ndị isi obodo sonyeere mmemme ahụ "Na-eme ihe na ntanetị", atụmatụ nke Mịnịstrị nke Mmepụta na nso nso a ga-agbasa na obodo ndị ọzọ dị na Spain. Site na mmejuputa atumatu oru a, enwere ike ichikota usoro niile di nkpa iji gbanwee echiche nke ndi oru itumgbere ahia n'ime otu, site na windo site na windo.
Site na nke ọhụrụ a ị nwere ike ịhazi usoro ndị a ozugbo na akara site n'ụlọ na ngwa ngwa. Oge nke 28 ụbọchị - oge ọ na-efu iji mepụta ụlọ ọrụ na Spain mgbe ị gafere n'ọfịs nke ụlọ ezumezu obodo, obodo kwụ ọtọ, ndị na-edebanye aha, akwụkwọ ikike ma ọ bụ ikike ụtụ isi, n'etiti ndị ọzọ, belata nke ukwuu site n'okporo ụzọ a n'ihi na ọ eme akwukwo nile na ntanetị, belụsọ maka notari.
Kpachara anya na kredit
Tupu o kwe omume ịme nkwekọrịta otu mgbazinye ego ndị a, ọ dị mkpa iji nlezianya nyochaa nkwekọrịta ahụ iji nyochaa kedu ọrụ ọ na-etinye na ego ole edepụtara ha, ebe ha nwere ike ịbawanye ọnụahịa ikpeazụ maka iji ego a. Na nke ugbua oghere, ndị ọzọ ndị ọzọ gbara gharịị ndị ọzọ na-agbakwunye na-agbakwunyere na-esite ọ bụla ije ma ọ bụ idegharị kemgbe nkwekọrịta nke ngwaahịa a. Ha bụ isi ihe ndị a:
Ndị a na-arụkarị ọrụ na nkwekọrịta ha bụ ndị na-emepe emepe, nke na-anọchite anya 2% na 3% nke oke achọrọ.
Ndị ọzọ na-adịchaghị ala nwere ike ịpụta n'ụdị ngwaahịa a na nke metụtara mgbakwunye na mbenata nke ego ahụ na, nke nwekwara oscillate n'etiti 2% na 3%.
N'ihe banyere ịkwụghachi oge mbụ, n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ, onye gbaziri ego ga-akwụ onye na-agbaziri ego ụgwọ ụgwọ maka ịkwụghachi oge na ego nke ihe dị ka 1,00% nke ego nke mgbazinye ego ahụ akwụgoro tupu oge eruo.
Ntaramahụhụ ọzọ enwere ike ịgụnye bụ nke esitere na nke a ga-agbanwe nkebi nke nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ, ma ọ bụ ka agbanwee ya.
Olee otú ndị a Ebe e si nweta?
Klas a nke otuto na ụfọdụ ụlọ ọrụ ụlọ akụ na-ere ahịa na-enye ndị nnata ha ego na ogologo oge nke itinye ego azụmaahịa ha, na-ekwe omume ịnakwere ọnụọgụ ego ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe dị ka atụmatụ iji dọta uche nke ndị debanyere aha ha, ịnweta a akara akwụmụgwọ nke nwere ike iru euro 50.000, nke ahụ na-echekwa oge ịkwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ nke sitere n'etiti 5 na 15 afọ.
Enwere ike iji akara akwụmụgwọ a rụọ ọrụ zuru oke maka ọtụtụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ọkachamara nke ndị na-achọ ya, site na inweta ụlọ, ịkwụ ụgwọ maka akụrụngwa, arịa ụlọ, akụrụngwa kọmputa, wdg, na-agabiga mkpa kachasị nke azụmaahịa ọ bụla. .
Ọzọkwa ndị ọrụ onwe ha na ndị ọkachamara nwere ike ịnwe ọwa ego ndị ọzọ dịka mkpa ha si dị, dịka ọmụmaatụ, iji mezuo ọrụ gbasara ego ha, maka nke e mepụtara ọwa ego ndị ọzọ akọwapụtara ma na-enwechaghị mmejuputa onyinye ha ugbu a.
Ebe e si nweta ụtụ isi
Agbanyeghi na emeputara otutu ihe ndi eji eme ego iji nye ego di nkpa maka oru kwesiri nke oru ha ma obu ihe omuma ha, agaghi echefu ihe ndi ozo ndi otu a choro. N'ezie, freelancers na ndị ọkachamara Ha nwere ike ịnwe ọwa ego iji mezuo ọrụ gbasara ego ha, nke mepụtara ụzọ ọzọ akọwapụtara ego. Nke a bụ ihe gbasara "Paykwụ Taxgwọ Taxkwụ Taxgwọ" nke ụfọdụ ụlọ ọrụ akwụmụgwọ amalitela n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, na nke a bụ otuto ọkachamara maka ịkwụ ụgwọ ụtụ isi gị. Isi ntinye ya dabere na ọ naghị eburu ọmụrụ nwa yana enwere ike weghachite ya n'ime oge ọnwa atọ.
O nwekwara amortization kwa ọnwa ma ọ bụ ntozu oke na nnabata nke ọrụ mmeghe nke dị elu karịa ụdị ego ndị ọzọ, ọkachasị 3%, nke bụ kpọmkwem isi nkwụghachi azụ nke ngwaahịa ego a gụnyere n'oge a na-etinye ya. a na-agbakwunye na ndị ọzọ na-enweghị okwukwe nke na-enweta site na mmegharị ọ bụla ma ọ bụ ndegharị ọ bụla site na ntinye ngwaahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Etu esi emepụta ecommerce?
Uru nke ịzụ ahịa n'ịntanetị